Nooca DVD A (Digital Video cajalid ama Digital boosaska badan cajalid) ee disc indhaha loo isticmaalo kaydinta xogta iyo boosteejo ah oo multimedia sida. Waa isticmaalka ganacsiga ugu caansan waa u ciyaaro daafaca diiwaan sawirada mooshin / Videos, sida ay magaca u taagan tahay (Digital Video cajalid).
Guud ahaan DVD video kasta waxa ku jira saddex nooc oo ah file, VOB, IFO iyo BUP. Dhammaan files waxyaalahan waxaa loo kaydiyaa "VIDEO_TS" hagaha ee asalka u ah DVD ah.
VOB (Video UJEEDDO) waa files ugu muhiimsan ee DVD ku jira xogta dhabta ah oo ay ku jirto filim ah MPEG-2 video il iyo taageero audio. VOB files Tan waxaa had iyo jeer la jebiyey ama wax ka yar 1 GB ee size.
IFO (Information) waa qayb ka mid ah counter file VOB ah. VOB ka kooban yahay il warbaahinta laakiin file IFO waxaa ku jira macluumaad ah ee cutub, subtitles iyo kuwan raadkaygay maqal ah oo video ah. Sida halkaas oo Suurad la bilaabo, halka ay audio gaar ah ama il Cinwaan waxa uu ku yaalaa, macluumaad ku saabsan hawlaha menu iyo navigation. Wixii qalabka DVD wax khasab file VIDEO_TS.IFO ah in la joogo on DVD noqon.
Files BUP (gurmad) waa nuqul saxda ah ee files IFO oo kaa caawin in ay dhacdo file IFO musuqmaasuqa.
War weligeed aad rabto in, waxaad aad u wareejin kartid aad jeceshahay movie DVDs qalabka warbaahinta sida iPhone, PS3 ama PSP? Habka ugu fiican ee in loogu badalo aad DVD video files qaab MP4. Waxaa jira hab oo kala duwan si loogu badalo DVD aad u MP4 laakiin isticmaalaya file IFO waa mid ka mid ah habka ugu sahlan ee diinta video.
Qaybta 1.1: Best IFO in MP4 Video Converter
Qaybta 1.2: Beddelaan IFO in MP4 Isticmaalka Wondershare Video Converter Ultimate la Loss Tayada Zero on Windows
Qaybta 2.1: IFO Free in Converter MP4
Qaybta 2.2: Step By Step Guide for IFO in Converter MP4 Isticmaalka Wondershare Video Converter Free
Qeybta 3: Aqoonta Extended ee IFO
Waxa jira barnaamij video Converter kala duwan iyo web portal online in laguu ogolaado in aad si geliyaan aad video oo badalo qaab kale oo galay. Waxaa jira qaar ka mid ah la dhaafi karin sida aan aad gali kartaa in ka badan file 100MB ama laga badiyay tayada video.
Haddii arrimaha tayo leh, waxaannu ku talinaynaa in la isticmaalo Wondershare Video Converter Ultimate .
Wondershare Video Converter Ultimate Kuu ogolaanaya in aad si aad u badalo file warbaahinta ku dhawaad ​​in qaab kasta oo la eber tayada lumin. By isticmaalaya farsamo ka hor barbardhigo "Madax-ilaa-Head" waa 30 jeer ka dhakhsi badan Converter kale. "Wondershare Video Converter Ultimate" 159 qaabab ay taageerayaan oo ay ku jiraan ugu dambeeyay 4K video qaab iyo qalab la qaadi karo ay taageerayaan. Ay ka mid yihiin diinta video, ka dib waa qaababka ugu muhiimsan ee ugu weyn ee software this.
Beddelaan 159 video format ay ka mid yihiin 4K iyo 3D.
30x soomi video diinta.
Stream warbaahinta in TV via streamers warbaahinta sida Chrome ee kabka (Roku, Apple TV, Madaxweyne Siilaanyo 360 ama PS3).
Taageero DLNA-ka dhisay.
Bedelka video cable USB aan.
Samaynta DVD la menu iyo template.
Download YouTube Video - iyadoo mid ka mid click!
Ka dib markii talaabo caawimaad hagitaan talaabo ay ku tusaan sida ay u badalaan file IFO DVD soo dhex galay MP4.
Tallaabada 1 IFO Add File
Waxaa jiraan labo siyaabood ee loogu daray file IFO ee "Wondershare Video Converter Ultimate"
rakibi iyo Orod aad "Wondershare Video Converter Ultimate"
Riix kasta "Add Files" badhamada ama "Jiid iyo dejinta" files ka aad gudbiso browser.
Ka dib markii gujinaya "Add Faylal ay" furan ah suuqa kala yar.
Fur DVD drive iyo dooro "VIDEO_TS" folder
Dooro "dhammaan faylasha (*. *)" Ka hoos menu.
Dooro "VTS_01_0.IFO" file.
Habka kale ah.
Guji "DVD Load".
Laga soo daadiyaa menu, dooro "cabbayso IFO Faylal ay ...".
Dooro "Main Movie" fursadaha foomka.
Ka dib markii Select IFO soo gudbin aad u leedahay in ay doortaan MP4 sida qaab wax soo saarka aad looga baahan yahay.
Dooro "Qaabka", "Video" Iyo "MP4 Video".
Ama waxaad ka raadin kartaa qaab wax soo saarka aad looga baahan yahay.
Guji "Meeshay" icon u audio iyo video tayada iyo qaraarada.
Guji "i" u ku daray "metadata", waayo, waxaad Lugood iyo aaladaha Apple.
Marka aad dhammeysato waxa aad hadda bilaabi karaan diinta by click fudud on "Beddelaan" button.
Waxaad ka heli kartaa file aad ku badaley adigoo gujinaya "Folder Open"
Tallaabada 4 Edit iyo Habee Your Video (Ikhtiyaar)
Samayso videos yar xiiso by sixiddiisa leh "Wondershare Video Converter Ultimate"
Waxaad samayn kartaa tafatirka hawsha kala duwan oo aad video on wax yar ka hor u beddelaya.
Ka hor inta aanad bilaabin qaab beddelidda dooro "Edit" button
Ka dib markii aad la doonayo beddelo laga yaabaa in aad u baahan tahay, guji "Beddelaan" badhanka si ay u bilaabaan diinta video.
Wondershare Sidoo kale barayaa Wondershare Video Converter Free la audio inta badan caadi ah / video taageeray files.
Wondershare Video Converter Free Kuu ogolaanaya in aad 10 watermark free video beddelaad la qaababka ay u qurux badan editable lacag la'aan ah.
Wondershare Video Converter Free Ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah:
Beddelaan ku dhowaad dhammaan qaabab caan ah.
Video download One click ka YouTube.
Easy in ay isticmaalaan la User saaxiibtinimo dhexgalka.
Wondershare Player Warbaahinta oo dhan.
Guji "Add File".
Dooro "Dhammaan files (. * *)" Ka hoos menu ka "nooca Files:".
Ujeedada in aad leedahay si aad guji hoos "Qaabka Output".
Dooro "MP4 Video".
Waxa kale oo aad ka raadin kartaa adigoo isticmaalaya doorasho raadinta.
Tallaabada 3 Edit iyo Customised Your Video (Ikhtiyaar)
Wondershare Video Converter Free Sidoo kale bixisaa si aad u astaysto aad videos inta aadan badalo IFO in MP4 halkii aad leedahay si loogu badalo MP4 hore. Wixii siinayso video qaar ka mid ah tafatirka taabto, raac talaabooyinka soo socda.
Riix "Edit" button
Tafatir ah oo uu furmo suuqa ka muuqan doona, kaas oo kuu ogolaanaya inaad si ay u qabtaan soo socda hawl tafatirka:
Marka aad sameeyey labiska aad la doonayo, guji "ok".
Tallaabada 4 Start Hab-badalo
Marka aad falay oo dhan looga baahan yahay beddelo guji oo kaliya "Beddelaan" button iyo diinta file aad ku bilaaban doono. File saarka ayaa lagu kaydin doonaa folder Xusidda ama aad si toos ah u heli karaan faylka kaliya guji "folder Open"
1. Waa maxay IFO?
Sida kor ku xusan "IFO" ku tilmaamay waa File DVD Information ah taas oo sidoo kale counter qayb ka mid ah .VOB ama file .VRO ay ku jiraan madax, in u sheego ciyaartoyda DVD waxa shaashadda si ay u muujiyaan ee bilowga ah, halkaas oo mid kasta oo bilowday cutubka, halkaas oo kuwan raadkaygay audio yihiin ku yaal DVD, iwm IFO File ka shaqeeya in lala VOB ama VRO files, kuwaas oo ka kooban xogta audio iyo video dhabta ah. The "Video_TS.ifo" (sidoo kale loo yaqaan Manager Video Information file) file ku jira oo dhan ay gacanta iyo macluumaad loo maqli karo, waayo, DVD ah. Waxaa loo baahan yahay The "Video_TS.ifo" file in la joogo on disc-waafaqsaneyn DVD noqon.
2. Sidee u ciyaaro IFO on Windows iyo Mac?
Files IFO ma aha qaab file DVD video si aad u ciyaari karaa IFO files isticmaalaya ciyaaryahan kasta DVD. Ciyaartoyda DVD ugu caansan waxaa ka mid ah VLC ciyaaryahan Windows iyo VLC ciyaaryahan Mac. Waxaa intaa dheer, waxa kale oo aad ka ciyaari kara faylasha IFO, kuwaas oo la isticmaalayo Windows Media Player on Windows. Sidoo kale waxaa jira ciyaartoy badan oo saxaafadda dibadda taas oo ay taageero u IFO video files sida hoos ku qoran
Waxaad isticmaali kartaa mid ka mid ah software soo socda si uu u furo file IFO ah in Windows:
Roxio abuura 2010
In Mac Waxaad isticmaali kartaa mid ka mid ah codsiyada soo socda si uu u furo file IFO ah:
Titanium Roxio Rooti 10
Dhiiran, dhoofinta iyo MP4
Sida loo Download vimeo in MP4 leh tayo sare leh?
> Resource > MP4 > Sida loo Beddelaan IFO in MP4 la Loss Tayada Zero on Windows iyo Mac